Daawo: Faroole oo si adag uga hadlay Khilaafka maamulada & Dawlada dhexe Iyo Wafdigii Garoowe yimid Maanta ! | KALSHAALE
Daawo: Faroole oo si adag uga hadlay Khilaafka maamulada & Dawlada dhexe Iyo Wafdigii Garoowe yimid Maanta !
Sep 16, 2018 - 19 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo ka mid ah mudanayaasha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka dowladda dhexe iyo Maamul goboleedyada iyadoo xubno ka mid ah Aqalka Sare oo dhexdhexaadinaya khilaafka labada dhinac ay maanta yimaadeen magaalada Garoowe.
Xildhibaan Faroolle ayaa sheegay inay doonayaan dhex dhexaadinta khilaafka labada dhinac, waxaana uu xusay inay dhagaysan doonaan tabashooyinka waxa la isku haysto, Wuxuuna sheegay inay xildhibaanada masuuliyad ka saarantahay danta guud ee Soomaaliya, Islamarkaana ay matalaan Maamulada.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (19)
Madaxda mamuladu dharkii ayeyso dhigteen dawladana khalad ayeyku haystaan .
Waxaba kagasii daran o waxey dhaheen amnigeena xamar kuma amineyno o dhex dhexaadin ayaan ubahanahay kkkkkkkkkkkkkkkkkkk Anagaa yaab aragnay waxey rabaan afduub cad ogabasho lahayn balse laga yeeli mahayo khaladkas.
Dawladu hala hadasho balse wax cad waa ineyla yimaadan sheko mooryaan nooo kkkkllkkllkkllkklkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklkkkklkkkkkkkkk
Mustaffe Daacad yaa magiciisii jabsaday?
Faroole oo talo siiyey Gaas
-Gaasow anigaa eedey Mucaarad Mogadishu maantana sali iyo Guno iigu jawaabey,
Qeylo aan loo juuqin, qeylo la’aan ayaa dhaanto ee nimanka u tag oo u sheeg in Aqalka Sare laguu xaar xaaro, ileen boowe waan is naqaan oo furaha maqaayadda Garowe wuxuu kuugu egyahey December 2018.
* Rag waxaa ugu liito Nin maqan oon la tebin
* Dumarna waxaa ugu liito islaan carootey oo aan la soo caro celin.
Caku shakey anaa shaleyto ka joogo..
Sida uu sheegay faroole markii horaba aqalka sare wexey ka yimadeen maamul gobaleedyada taas oo mecneheedu yahay in ay wakiil ka yihiin maamul gobaleedyada. Hadeey tabasho qabaan wexey usoo gudbin lahayeen aqalka sare. Aqalka sarana wuxuu baari lahaa tabashada ay soo gudbiyeen maamuladu. Hadeey dowladdu qaldan tahay iyaga ayaa laga rabaa in ay la gar noqsadaan dowladda. Sidaaas ayey wada shaqeyntu ahayd. Laakiin sheekadaan ay ku keceen maamuladu wexey meesha ka saartay shaqadii aqalka sare.
* hadalka ka soo yeeray maamulada ee ah waa in la helaa gacan sedaxaad waa gef aan loo meel dayin. wexey cadeyn u tahay sida ay munaafiqiin u yihiin. Mana laga bafin doono.
* qodobka kale ee ah waxaan u baqeynaa amaankeena sidaas daradeed wada hadalka hallagu qabto meel kale. Su.aal halagu celiyo maamulada xageey doonayaan in lagu wada hadlo? Hadeey dalka gudihiisa tahay ok laakiin hadeey doonayaan dalka dibadiisa waa qalad kale oo ka gelayaan dalka mana laga yelaayo.
Faroole nin shaqadiisii senator ahaan haysta buu u egyahay. Bal aan sugno meesha wax lagu dhameeyo.
Waxaan arkay meelaad ku qortay majeerteen waligiis 1 sano madaxwayne noqday. Waxaan u fahmay inaadan cabdullahi yusuf aun oo dawladda hadda jirta meeshay ku shaqayso xaarxaaray inaadan madaxwayne u aqoon.
Cali naafto iyo cabdulqaasin oo guri karaa deganaa aad madaxwayne u taqanaano.
Nacaybku waa balo ismana qariyo.
Oo qofkii run sheega ma magaciisa ayaa la jabsaday.
Maamuladu waxay dhaheen ciidan iyo calaf toona dhiibi mayno hadana amniganaga hala ilaaliyo ayey leeyihiin.
Aynu aragno meesha ay gaadhaan.
War faroole ha la cafiyo maxaa yeelay isagu qodobo cadcad ayuu ku doodi jiray iyo dasduur ayaa la jabiyey.
Hada waxaa yimid kuwo iska xanaaqsan waxay tabaanna aan la garanaynin.
Faroole ayaa maalin iga qosliy show waxay ka dayn waayeen sheekh hebel.
Kulahaa waa inaan sheekhnimadaydii la soo laabaataa.
Sheekh Cabdiraxmaan sheekh maxamed sheekh riyoole sheekh harti alyamani kkkkkkkkkkk
Walaahi waa runtaa, Faroole Qodobo ayuu miiska keenijirey siduu rabo haba u qortee.
Faroole oo magaalo ku dhalan lahaa sida Gaas oo dugsi sare ka bixi lahaa looma adkeysteen. Derbi kasto qodob ayuu ku dhejinlahaa.
Gaas Gafuurka lee u buuran, waa nin ku soo korey Dhuusa-mareeb oo foorjo Ceyr qabo.
Soo maahan ninkii dhahey Geedo wax ha naloogu qeybiyo aqooney xaal qaado ( India ayaa Shahaadooyinka inflation ku ridey).
Sxb anigu xumaan ma sheegin ee waxaan sheegay wixii dhacey
– Max’ed Siyaad = 21
– Farmaajo = 4
– C/rashiid = 1 sano
“” Ninkii runta sheego nama jecla,
Soomaali Gamaadiid ayaa ugu run badan oo gabey ku sheegay runta reer Bari.
Meelbaan ku arkay adoo i xamanaya oo ila simay nin la yidhaa Land Of Punt.
Horta anuu ma ihi nin qabiil neceb e waxaan u dooda dad aan ahayn Daarood ee beenta loo sheegay,lagu maamulay ee xataa dhulkoodii shisheeyey lagu soo homaayay.Waxaan u doodaa dadka aan Daaroodka ahayn taariikhdooda la aasay.
Waxaan u doodaa dadka aan Daaroodka ahayn ee lagu sheegay dawladiiddka ee ay ka midyihiin Beelaha Hawiye iyo Isaaq.
Land of Punt,wuxuu ku sheeqeeyaa masgaxda Mr Gaas.Haduu Gaas farxana wuu faraxsanyahay,aduu Mr Gaas cadhoodana wuu cadhoodaa.Maalinta uu Gaas tago muqdisho ee ay Formaajo heshiiyaan,Land of Punt wuu faraxsan yahay.Haduu Gaas caayo Muqdisho,Land Of Puntina wuu caayaaa Muqdisho.
Anuu waxaan u doodaa dawlad Somaliyeed oo waxan necebahay dadka diidan qarannimada Somaliyeed.
Hadaba,aduu labada mid raac.
Reerku ha guuro iyo Reer ha negaado.
Sidaa Land of Punt Reerkiina raac,ama sidayda u dood dadka Somaliyeed ee la dulmay taariikhdooda,dhaqankooda,dhulkooda iyo sharaftooda ee ay Beeesha Daarood cadowga u noqotay.
Somalidu in aanay lahayn cadow aan Daarood ahayn;dhaqan ahaan,dawlad ahaan,Dal ahaan iyo dad ahaanba waan ku sharaxikaraa – A to Z.
Arinkan waxaan bilaabay,2006-kii.
Maanta arinkii wuu balaadhay oo waxaan yeeshay dad badan oo sidayda wax u arkaya.
Doodaadu micno samayn mayso Marka aad soomaalida qaar caydo qaarra amaanto adiga oon kala reebin denbiilayaash iyo inta kale.
Marka intuu qof denbi sameeyo aad dhahdo awalba reer hebel buu ahaa.
Doodu micno samayn mayso Marka labo qof denbi wada galaan deedna aad dhahdo ka reer hebel baa denbiile ah ka kalana aad dhahdo kaasuu ku dayanayey.
Doodaadu waxba tarimayso wixii xunba inaad reer gaara saarto inta fiicanna qolo siiso.
Markii lagu dhaho war ka daa, qiilka kaliya ee aad haysato waa runtaa la igu nacayaa.
Miyaan tirin karaa.isku soo wada duuboo qaabka aad wax u wado waanana ma aha dagaalla ma aha.kkkkkkk
Horta been ha iga sheegin, aniga Gaas iskama dabo socdo oo mucaarad baan ku ahay marka toosanayn.
Wadanku waa federal horumar la rabo on ku tartamaan in Gaas gobolka matalo u doodo waa shaqada loo igmaday.
Gobolkayga iyo dalkayga labada inaan taageero waa xaq.
Darood baa keligiis eeda wada leh: wax nin weyn oo caafimaad qaba miis lasoo fariisto maaha.
Sheik iyo shariif, wadani, rag xoriyaddiu naftooda u furay iyo tuug khainu wadan waa leeyiin.
Qabiil walbana waa saas.
Waadna ogyahay dad jiraan in Hawiye Somalia gubay, bililiqo, kufsi iyo dhac keeneen.
Cuqdada qabiil Somaliyeed, will make you sick.
Aniga tartan kuguluma jiro, xanuun intaas le’eg ma qabo.
Meesha fikirkaaga dhiibo.
Darood -A to Z ii sheegi maysid oo anigaa ka dhashay oo kaa badiya, ma nin baad reerkiisa uga sheekayn?
Beenta taariiqda Somalida ka sheegto miyaad on reerkayga ii taruurixiso oo hadana kaa dhageysto.
Dhuusadaas dabaysha igala mari madaysid.
Kalshaale tororogtaada wado, neefso oo soo daa mariidka caloosha kaa buuxa.👺
Runtii ma garanayo qof noocaaga ah sabab waqti iyo hadal ugu khasaariyo.
Bal u fiirsada Dabshid iyo Mr Bahal waa sidii labo baqbaqaa oo maxkaxdooda ku programsan majeerteen iyo Darood.
Hadalkooda xigmad kale kuma jirto.
Labadaas nin habayaraatee inay wax dalkii ka socda in kugu kordhiyaan haka sugin.
Waa dad meel uga dhegtey in loo daayo mooyee ladoodis malaha.
Cudurka Darood in hadda kugu dhacay moodayey ileen ilaa 2006 ayuu ku hayey.
Muddo intaas le’eg nin ciil la oynayey oo paranoia ku dhacay waa iska gartay.
Weliba hadaad hadda isdaba qaban waali baa ku xigta oo adoo suuqa taagaan oo Daroodbaa saan i yeeley leh oo midkaloo waalan oo Darood ah daanka ku jebin. Ma maqashay kuwo waalan oo qabiil suuqa isku dilay. Your fate.
Saaxiibka Dabshid kaama sokeeyo.
Puntland hadaad tihiin ma ninba ninka uu ka xin yahay baad doorataan.faroole ayaan la yaabanayn saa gaas baad keenteen.
Hada waxay maraysaa duqii faroole ahaa dib ha loo doono.isagu dasduur iyo waxaas ayuu ku doodi jiray bal gaas wuxuu rabo ha la garto.
Caawa @mr bahal god buu kuu galay miyaa.kkkkk
Horta siyaadadda Somalia deeply ulama socdo laakiin arinkan goboladii isku raaceen waxay tahay in dowladda waxwalba Xamar ku koobtay oo moodid in dalkii hal magaalo yahay.
Waa dad federalka diidan macal Farmaajo.
Waxaa la isku haystaa dalku federal ma yahay mise maaha.
Hadduu federal yahay waa in masuuliyadda iyo awooda lakala qaybsadaa oo dastuurka la raacdo
Gaas wax u gooni ah maaha oo adiga haddii puntland madax u ahaan lahayd taas ku qasbanaan lahayd.
Waa qadiyad dal maaha qof.
Mr Bahal hawiye u doodid kaagama baahna e isaaqa aad leedahay waan u doodaa miteyna ahayn kuwii markay qaxootinimada kasoo noqdeen gobolkaad kasoo jeedo xitaa masaajidada maatadii SNM kaga dhuumatay kaga dabagalay ee ku xasuuqay ma aha ayagoo ku andacoonaya gadabuursi waxay la jireen dawladii kacaanka